China API 602 valvụ ụwa niile ndị na-emepụta na ndị na-eweta ya | Akụkọ
Ngwaahịa (L), F347, F321, F51), Alloy 20, Monel, Inconel, Hastelloy STANDARD Design & rụpụta API 602, ASME B16.34, BS 5352 MFG'S Njikọ ihu na ihu - Flange na-akwụsị ASME B16.5 - Socket Weld na-ejedebe ASME B16.11 - Butt Weld na-ejedebe ASME B16.25 - Ihe ngwụcha na-agwụ na ANSI / ASME B1.20.1 Ule & na ...
Nha: NPS 1/2 ka NPS2 (DN15 rue DN50)
Nsogbu nrụgide: Klas 800, klas 150 na klas 2500
Esorowo (A105, A350 LF2, A182 F5, F11, F22, A182 F304 (L), F316 (L), F347, F321, F51), alloy 20, Monel, Inconel, Hastelloy
Imewe & rụpụta API 602, ASME B16.34, BS 5352
Ihu ihu na ihu MFG'S
Njikọ Njikọ - Flange na-ejedebe na ASME B16.5
1.Forged Steel, N'èzí ịghasa na yok, ebili azuokokoosisi,
2.Nnweghị na-ebili Handwheel, Integral backseat,
3. Belata Bore ma ọ bụ Port zuru ezu,
4.Socket welded, threaded, Butt welded, Flanged Ọgwụgwụ
5.SW, NPT, RF ma ọ bụ BW
6.Welded Bonnet na Nrụgide Akara Bonnet, Bonnet Bonnet,
7.Solid Wedge, Mkpeghari Oche Mgbaaka, Sprial ọnya gasket,
NSW API 602 valvụ ụwa, oghere na mmechi akụkụ nke valvụ a na-agbazi agbagọ agbagọla nke ọnụ ụzọ bụ ọnụ ụzọ. Usoro ngagharị nke ọnụ ụzọ ámá dị n'akụkụ akụkụ nke mmiri ahụ. Enwere ike mepee ma mechie valvụ ọnụ ụzọ ámá a gbagọrọ agbagọ, enweghị ike ịhazi ya ma gbanye ya. Ọnụ ụzọ ámá nke valvụ ọnụ ụzọ ámá valvụ nwere akara abụọ. Ebe a na-ekpuchi ihe abụọ nke ọnụ ụzọ ámá ọnụ ụzọ ámá kachasị na-etolite ụdị wedge, na wedge wedge na-agbanwe na valvụ ahụ. Thezọ mbanye nke valvụ n'ọnụ ụzọ ámá valvụ bụ: ntuziaka, pneumatic, electric, gas-mmiri mmiri linkage.
Enwere ike imechi oghere akara nke valvụ ọnụ ụzọ ámá a rụrụ agbagọ naanị site na nrụgide ọkara, ya bụ, a na-eji nrụgide dị n'etiti pịa ala akara nke ọnụ ụzọ ámá ahụ gaa n'oche valve n'akụkụ nke ọzọ iji hụ na akara akara ahụ, nke bụ akara onwe. A na-amanye ọtụtụ valvụ ụzọ ka ha mechie, ya bụ, mgbe emechiri valvụ ahụ, ọ dị mkpa ịmanye efere ọnụ ụzọ megide oche valvụ site na mpụga ike iji hụ na akara nke akara akara ahụ.
Ọnụ ụzọ ámá nke ọnụ ụzọ ámá ahụ na-agagharị n'ahịrị na mpempe akwụkwọ valvụ, nke a na-akpọ valvụ ọnụ ụzọ mgbochi (nke a na-akpọkwa valvụ ọnụ ụzọ mepere emepe). A na-enwekarị trapezoid na eriri na-ebuli elu. Nri ahụ na-esi n'elu valvụ ahụ na ntuziaka na-arụ ọrụ na valvụ ahụ iji gbanwee ntụgharị ntụgharị n'ime usoro ntụgharị, ya bụ, torque na-arụ ọrụ n'ime nrụgide ọrụ.
Uru nke esoro uzo uzo uzo
1. Obere mmiri mmiri.
2. Ike mpụga chọrọ maka imeghe na mmechi dị obere.
3. Amachibidoro usoro uzo esi agbabata.
4. Mgbe emepere kpamkpam, mbuze nke akara akara nke onye ọrụ na-arụ ọrụ pere mpe karịa nke valvụ ụwa.
5. Thedị ahụ dị mfe ma usoro nkedo dị mma.
Nke gara aga: API 602 ọnụ ụzọ ámá
Osote: C95800 ụwa valvụ API 602
Esorowo Steel Globe valvụ
API 602 pistin lelee valvụ
Weld Flange Gate valvụ
API 602 Aluminom Bronze Gate Valve